Indlela Yokwenza Ikhalenda Lokuqukethwe Kokumaketha Ngevidiyo | Martech Zone
Ulenza kanjani Ikhalenda Lokuqukethwe Kokumaketha Ngevidiyo
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, i-2021 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, i-2021 Douglas Karr
Kuleli sonto elidlule, enye yamaphrojekthi engiyethulile kwakuwukuhlolwa kokusebenza kweselula kweklayenti. Ngenkathi benza kahle ekusesheni kwedeskithophu, bebesalele ezikhundleni zamaselula uma beqhathaniswa nabaqhudelana nabo. Njengoba ngibuyekeza isayithi labo kanye nezingosi zezimbangi zabo, igebe elilodwa esu labo kwaba ukumaketha kwevidiyo.
Ngaphezu kwesigamu sakho konke ukubukwa kwamavidiyo kuvela kumadivayisi eselula.
Isu lino-multi-dimensional. Abathengi namabhizinisi benza ucwaningo oluningi futhi baphequlula ngedivayisi yeselula. Amavidiyo ayindlela enhle kakhulu:
I-YouTube isaqhubeka nokuba injini yokusesha yesibili ngobukhulu, enamavidiyo amaningi abukwa ngeselula.
I-YouTube iwumthombo ovelele wezixhumanisi ezibuyela kokuqukethwe kwesayithi lakho uma kunguwe Isiteshi se-YouTube kanye nevidiyo ngayinye kuthuthukisiwe kahle.
Amakhasi akho eselula, nakuba enemininingwane futhi efundisa, angaqhuba ngokuphelele ukusebenzelana nevidiyo ewusizo kuwo.
Yiqiniso, ukuthuthukisa a umtapo wokuqukethwe ividiyo idinga ukugeleza komsebenzi kusuka embonweni ngokusebenzisa nokwenza kahle. Futhi isu lakho levidiyo lingahlanganisa okuningi izinhlobo zevidiyo ukuxoxa indaba yomkhiqizo wakho ngempumelelo. Ikhalenda lakho akufanele libe yisihloko kanye nosuku lokushicilela nje kuphela, lidinga ukufaka konke ukugeleza komsebenzi, okuhlanganisa:
Izinsuku okufanele ividiyo yakho ishuthwe ngayo, igqwayizwe, ihlelwe, ikhiqizwe, ishicilelwe futhi ithuthukiswe.
Imininingwane yezinkundla lapho uzobe ushicilela khona amavidiyo akho.
Imininingwane ngohlobo lwevidiyo, kuhlanganisa nefomu elifushane amasondo ngokusebenzisa okuningiliziwe kokuthi kanjani-kuya.
Lapho ungashumeka futhi uphromothe amavidiyo akho, okuhlanganisa neminye imikhankaso engase ikuhlanganise.
Uzowukala kanjani umthelela wamavidiyo kukho konke ukumaketha kwakho.
Njenganoma yimuphi umkhankaso wokumaketha, ngingasebenzisa i-a uhlu lokuhlola oluhle lokuhlela khipha umqondo wakho ukuze ukwandise umthelela wokumaketha kwevidiyo yakho. Nakuba ividiyo ingase idinge ezinye izinsiza ezengeziwe ngesikhathi nangemali, izinkokhelo zevidiyo zibalulekile. Eqinisweni, ngingaphikisa ngokuthi uphuthelwa ingxenye ebalulekile yalabo abazoba amakhasimende akho ngokungafaki ividiyo ohlelweni lwakho lokumaketha.
Kule infographic, Ukukhiqizwa okukodwa idlula kukho konke odinga ukukwazi mayelana nendlela yokuhlela nokuhlela okuqukethwe kwevidiyo yakho ngamakhalenda okuqukethwe. Bachaza ukuthi ukusebenzisa ikhalenda lokuqukethwe kungasiza kanjani ekuthuthukiseni ukusebenza kokuqukethwe kwevidiyo yakho. Kukhona nemininingwane ethile ephezulu evela kubaholi bemboni yokuthi inqubo iwukhiye kanjani wempumelelo yesu lakho lokumaketha okuqukethwe.
Tags: indlelainfographicokukhiqizwayo okukodwaokuqukethwe kwevidiyoikhalenda yokuqukethwe kwevidiyoisu lokuqukethwe kwevidiyoukukhangisa kwevidiyoividiyo yokumaketha i-infographicisu lokukhangisa ngevidiyo
I-7 Automated Workflows Ezoshintsha Umdlalo Wakho Wokumaketha
Khalenda: Ungashumeka Kanjani I-Popup yokuhlela noma Ikhalenda Elishumekiwe Kuwebhusayithi Yakho noma Isizinda Se-WordPress